Unoziva Iwe Kuti Zvinotyisa Sei Iyo Yekugezera
musha / Blog / Unoziva Iwe Kuti Zvinoshatisa sei Imba yekugezera "Kunhuwa"? Tsvaga Iyo Chaiyo Sosi Yekugadzirisa Iyo!
2020 / 10 / 22 kupatsanuraBlog 2083 0
Iwe unoziva here kuti inotyisa sei iyo yekugezera kunhuwa? Maererano neongororo, kunhuwa kwechimbuzi uye hwema hunogona kukonzera asima, bronchitis, mapundu, uye chirwere chemwoyo nezvimwe zvirwere zvikuru.
Zvakaipisisa ndezvekuti vanhu vanopedza makore mashanu ehupenyu hwavo vari muchimbuzi, vachishandisa chimbuzi kupfuura maminetsi gumi neshanu pazuva, anenge maawa maviri pasvondo, zvinoenderana nemakore mashanu ehupenyu hwavo akakomberedzwa ne "gasi rine chepfu", funga pamusoro pezvose zvinotyisa!
Kune Pane Makuru Makuru Manyepo Nezve Bathroom Deodorization
Iyo yechinyakare yekugezera deodorization iripo ina hombe kusanzwisisana, ngatitarisei.
Nhema # 1.
Hapana Kukanganisa Kune Hutano hwevanhu
Tsvina yemunhu inoburitsa hwema kazhinji iine ammonia, hydrogen sulfide, uric acid uye mamwe magasi anokuvadza, kunyanya iyo hydrogen sulfide, kufema kwenguva refu kunokonzeresa hutachiona hwevanhu kuderera, kukurudzira pfungwa yemunhu yekunhuhwidza uye nhengo dzinoonekwa, zviri nyore kuita kuti nhengo isapindure, chiveve, kunyanya kune vakwegura, vakadzi vane pamuviri, vana vanokuvara zvakanyanya.
Kazhinji Vhura Exhaust Fani
Kero Kunhuhwirira Uye Bhakitiriya Kusvibisa
Exhaust fan inogona kutora chinzvimbo mune yekugezera mweya kutsiva, asi nekuda kwekuti chiutsi fan chiri kumusoro, zvakawanda zvinorema zvinokuvadza zvinhu uye zvine chepfu zvimisikidzo hazvigone kusiiwa nenzira iyi: mabhakitiriya anowanzo sunganidzwa kumadziro, matauro nebvudzi bhurasho nezvimwe zvinhu, hazvisi nyore kusabvisa kuburikidza neanodzidzisa feni kunze.
Iyo Inobvisa Yekunze Yekunhuwa.
Aromatics uye fresheners zvakagadzirirwa kuvhara kunhuhwirira kwakasarudzika nekuburitsa kunhuwirira, uye hazvigone kupindura nemweya unokonzeresa hwema hunoshamisa, senge ammonia nehydrogen sulfide, uye havagone kuora kana kubvisa magasi anokuvadza akadaro.
Uye zvakare, akawanda aromatics ane benzene mhete, aldehydes uye zvimwe zvinhu, kushandiswa kwenguva yakareba kunogona kukonzera kusingaperi chepfu, uye kutotungamira kukenza.
Stinky Bowel Mafambiro.
Zvimwe Zvishoma Zvakawanda Zvichaita.
Defecation, tinonzwa hwema hwetsvina yakabuditswa kana munhuwi wazadza materu ese etoilet ndokuparadzira kuimba yekugezera, kana ino nguva yekutsvaira, iyo nguva dutu rinoburitsa chimbuzi chegasi rinonhuwirira uye dzakasiyana siyana utachiona ku imba yekugezera uye yakanangana nehunhu hwekufema hwevanhu, inotsamwisa tsinga, inogona kutungamira kuchirwere.
Iko Kupi Kwekunhuwa Kwemberi Kunobva Uye Uye Maitiro Ekuigadzirisa?
1, Rinonhuwirira Source:
Pombi Drains Pasi Pombi
Iko kubatanidza ipombi yekudonha, iyo inoshandawo sedziviriro pakurwisa hwema uye zvipembenene zvidiki zvinobhururuka. Mazuva ano, kune U-mhando uye T-mhando pasi dhureni pamusika. u-mhando pasi dhureni rakakamurwa kuita rakadzika mvura chisimbiso pasi dhayeti uye yakadzika yemvura chisimbiso pasi dhureni maererano nehurefu hwenzvimbo yekuchengetera mvura. Kana mvura iri muchengeti yekuchengetera yopwa uye yaoma, hwema hwedhiraini huchauya.
Kana mvura yadonha, giravhiti inomanikidza chisimbiso kutyora, uye mvura inodzokera panzvimbo yayo yekutanga mushure mekupfura, uye magineti dhizaini anoibata zvakasimba. Panyaya yekudzivirira mweya: T-drain yakasimba pane U-kudhiraina, kana uriri hwepasi hune hwema hwakaipa, chinhu chekutanga chekufunga ndechekuti iyo U-drain yaburitsa mvura, uye iwe unongoda kudira imwe mvura mairi kuita kuti isapinda mhepo.
(1) Imwe ndeyekuchinja, kana uriri hwekudonha mvura chisimbiso chiri 50mm, kana chisimbiso chepasi dhureni hachina kuomarara, kana kukuvara, kuchitsiva nehunhu hwakanaka hwesimbi simbi pasi pevhu.
(2) Chechipiri, chisimbise, kana paine mukaha pakati pechisimbiso chemvura nembiya, tamba girazi regirazi kuti unamate.
(3) Disinfection, dururira kemikari inouraya utachiona muvhu dhure kuti iparadze zvakasara senge bvudzi rekugezera mushawa.
(4) Flush, kazhinji iine bhakiti diki remvura, inodururira uriri hwepasi, izvo zvakasara zviri muchairi zvichabviswa, uye kuona kuti mvura inovhara mvura.
(5) Tarisa chivharo chemhepo chepombi yekudonha padenga kuti uone kana chakavharwa nemarara, uye kana zvirizvo, chenesa.
2, Zvinyorwa Zvehwema:
Shamba Bheseni Drainage
(1) Iyo singi ipfupi yekudonha pombi inoiswa yakananga mukati mevhu uye iyo interface haina kuvharwa, ichikonzera iyo drain pombi kuti idzokere kunonaka.
(2) Iko hakuna bhajiro rekuchengetera mvura mubhesheni rekugezera rakadzika pombi, zvichikonzera kunhuhwirira kudzoka.
(3) Kugeza bvudzi uye zvimwe zvisaririra zviripo pamadziro epombi padyo nenzvimbo yekuchengetera mvura, inodzikira mushure menguva yakareba, kuumbwa kwekunhuhwirira, zvichikonzera kudzoka kwekunhuwa.
(1) Isa bhesheni rekugezesa pfupi dhayera mupombi yemudhiraina kuti uite rabha chisimbiso uye kuvharira hwema hwekudzoka.
(2) senge bheseni rekugezesa pasi penzvimbo yekugezesa haina kuchengetwa inokomberedza mvura, inogona kutsiviwa neye hosipaipi uye coil, kuumbwa kwemvura kukombama, ichivharira iyo yekunhuhwirira chiteshi.
(3) kugara uchichenesa kumeso kwebvudzi uye zvimwe zvisaririra kana uchigeza, usarega ichigara padhuze nekukochekera kwemvura pamadziro epombi.
3, Kunobva Kunhuhwirira: Toilet Seal (Flange) Chimbuzi Uye Kubatana Kweiyo Pipeji Pombi, Pane Chisimbiso, Chinozivikanwa Se Flange. Mazhinji Bathroom Kunhuhwirira, Haina Kuiswa Nekuda Kweiyo Seal Inokonzereswa.
(1) Bvisa chimbuzi zvakare uye dzorera chisimbiso.
(2) Kana mataira epasi akakomberedza chimbuzi ari mhango, gadzira mataira ane mhango kutanga, uye wozogadzira kubatana pakati petoilet nematiles epasi.
(3) Mushure mechimbuzi, nekukurumidza vhara butiro rechimbuzi.
(4) inowanzo shandisa mvura kuburitsa chimbuzi, kuitira kuti mvura inokotama isachengetwe mumvura yakafa, yakashatiswa mvura.
(5) Kugara uchishandisa kemikari (isiri-acidic) yekuchenesa mumiririri kuchenesa chimbuzi.
4, Hunhu hweSource.
Bvudzi uye zvimwe zvisaririra zvinonhuwa Shower yekugezesa bvudzi uye zvimwe zvisaririra, ichiyerera ichipinda muvhu drain drain pombi, yakareba-masara pane madziro echaini, kuora uye kunhuwa, zvichikonzera kudzoka kwekunhuwa.
(2) Gadzira utachiona kazhinji kuuraya utachiona hunokanganisa.
Pakapfuura :: Bathroom Mirror Kugadziridza, 99% Yevanhu Vanozeya Iyi Dudziro Zvadaro: Vanopfuura zviuru gumi Kurumbidza Pane Iyo Yekugezera Dhizaini, Yakakurudzirwa Unganidzo!